तपाईलाई थाहा छ, यी ४ राशि भएका मानिसलाई मन पर्दैन कसैको साथ ? - Filmy News Portal Of Nepal
मानिसको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभाव पर्छ । जसले उनीहरुको जिन्दगी प्रभावित हुन्छ । यहि नक्षत्रको आधारमा हरेक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले उनीहरुको स्वभाव र भविष्यको संकेत मिल्छ । धेरै मानिसलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केहि यस्ता मानिस नि हुन्छन् जो एक्लै बस्न रुचाउछन् ।
जान्नुहोस् कुन राशिको मानिसलाई मन पर्दैन भिडभाड:
१. मकर राशि: मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।
२. मिन राशि: एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।
३. कर्कट राशि: यी राशि भएका व्यक्तिहरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिनेको व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्यारो महशुस गर्छन।
४. कन्या राशि: यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन् । यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन । एजेन्सी ।